Ubume bokuGcina nokuSebenzisa | Martech Zone
I-Anatomy yokuGcina kunye nokuSebenzisa
Njengabathengisi, ngamanye amaxesha umba wethu omkhulu kukufumana ngaphezulu kwesigqibo sokuthenga. Abantu abayiqondi, kodwa kukho inzululwazi kweso siganeko. Ngelixa le infographic ijolise kumbono we isigqibo sokuthenga sabathengiAbathengisi kufuneka bajolise kwindlela abanokunceda ngayo kwinkqubo yoyilo, ukupakisha, ukuthumela imiyalezo kunye nokuzibandakanya. Ukujonga iinqwelo zokuthenga ezishiyiweyo kunye neendwendwe ezingafunekiyo- emva koko kuvavanywa ukwahluka okungafaniyo- kunokususa imiqobo yokungena.
Sep 24, 2012 ngo-8:24 PM
Enkosi ngeli galelo lichazayo lokwahlula inkcitho kunye nokonga. Eyona nto ilungileyo malunga nesi sithuba kukuba siqonde isiphelo sokuchitha imali eninzi kakhulu xa kuthelekiswa nokonga kakhulu.enkosi ngeli galelo libalaseleyo.